မှကြွလာသောအခါညမ်း subcultures ရှိပါတယ်၊အခြားအလိန်အထာင္ခန္းထိုကဲ့သို့သောလှပသောအသိုင်းအဖြစ်အရွယ်ရောက်စိတ်ကူးယဉ်။ လျှင်သင်၏အစိတ်အပိုင်းအရွယ်ရောက်ယဉ်ကျေးမှုကို၊ထို့နောက်သင်လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဂိမ်း။ ထိုနာမည်မှာအဖြစ်၊အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများအပေါ်သာအာရုံစိုက်အမာခံလိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်အရေးယူ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုရှိသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်။ သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အန္တိမ fursona နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်၏အင်္ဂါရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ထို့နောက်သင်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေအိပ်မက်များအတွက်ဂိမ်းအလှန်ကမ်းလှမ်းကြောင်းအများကြီးလွတ်လပ်တယ်။, သို့သော်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း၏ဤဆိုက်သည်အဝန်းသောခံစားချက်ရလိမ့်မယ်။ မသာကြောင်းကျွန်တော်တို့အသိုင်းအပေါ်အင်္ဂါရပ်များဆိုက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်ချွတ်ဆွဲအတိုချုပ်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းပျော်မွေ့နိုင်။ ခန့်မှန်းကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်သင်? လုံးဝဘာမျှမရှိသည်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းဖွင့်မည်သူမဆိုများအတွက်။ မျှမရှိရဲ့မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုအဘို့အသင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်။ သင်ရုံရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်သင်အသက္ ၁၈ ထို့နောက်သင်လက်လှမ်းမီရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစုစည်း၏အခမဲ့လိင်ဂိမ်းများ။ ဒါကြောင့်၊ရဲ့တစ်ဦးကြည့်ကြရမှာဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုဒီတော့ကြောက်မက်ဘွယ်သော။
သင်အရွယ်ရောက်လိန်၊သင်သိဖို့ဘယ်လောက်ခက်တွေ့ရွယ်ရောက်ဂိမ်းများ၊ကုန်အံ့တယောက်တည်းအချို့သောအကြောင်းကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်သင်သည်လိင်ဂိမ်း။ ကောင်းစွာ၊ငါတို့သည်လည်းဘယ်လောက်ခဲယဉ်းသိရအဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲလဆင်းမဲလိုက်ဂိမ်း၏ဒီစုဆောင်းမှု။ ဒါပေမယ့်သူတို့အခုနောက်ဆုံးစုဝေးအပေါ်တဦးတည်းအရာအဖြစ်သင်၏ရွယ်ရောက်စိတ်ကူးယဉ်အတွက်အင်တာနက်။ အစုအကြောင်းကျွန်တော်တို့နှင့်အတူကြွလာအားလုံးအမြိုးမြိုး။ ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်လိင် simulators အရာ၌သင်မင်းအမျိုးမျိုးဠာမှတစ်ဦးပထမဦးဆုံးလူတစ်ဦးရှုထောင့်။, ကျနော်တို့ရှိကြရွယ်ရောက်သောအားကစားပြိုင်ပွဲအရေးယူရန်အလှန်နှင့်အတူ၊ပွင့်လင်းကမ္ဘာဂိမ်းအတွေ့အကြုံများသည့်အတွက်အရွယ်ရောက်ဇာတ်ကောင်အမည်ပေါက်လာကြလိမ့်မည်နှင့်အတူနောက်ကျောဇာတ်လမ်း။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဖြေရှင်းဖို့ရှာဖှေနှင့်အားလုံးလိင်အဖြစ်ကြွလာများအတွက်အကျိုးသင့်တိုးတက်မှုစောင့်ရှောက်တော်မူမည်သည့်အရာသင်ကကစားနှင့်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါစေထိုက်အားလုံးအရေးယူတယ်။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်ကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်၊ထို့နောက်သင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်အားလုံးစာသားအခြေခံပြီးဂိမ်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက် erotica။ သင်၌ဗတ္တိဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုနှင့်အတူဤဂိမ်း၊နှင့်သင်တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုအဆိုပါဇာတ်လမ်းအပေါ်ဝင်။, ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊မတိုင်းလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုလမ်းတလျှောက်အလှန်ဆက်သွယ်၊ဒါကြောင့်ထက်ပိုကောင်းတစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထု။
ငါသွားမဟုပ်ဘူး၊သင်စောင့်ရှောက်ဖို့အကျီကျီမဆိုကြာကြာသင်ပြောပြလိမ့်မယ်အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းသင်အကယ်စင်စစ်ဖို့မစောင့်နိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းအရတနာငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ရှင်ကအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများ။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အတူတက်လာသည့်စက်ဝိုင်းများကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်သင့်ရဲ့ fursona ပြီးတော့သင်သွားလိမ့်မည်ထွက်မြေပုံပေါ်တွင်ရှာဖွေနေများအတွက်အခြားကစားသမားနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားလုံးအတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်သူတို့နှင့်အတူအတုရှိသည်လိင်သူတို့နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှု။, တယောက်မျှမသိကြလိမ့်မည်သင်၌နေသောသူအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကိုသင်ပြောပြမည်မဟုတ်သူတို့နှင့်မည်မဟုတ်လိုအပ်သောအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးမီသင်။ သင့်ရဲ့စက်ဝိုင်း၊ထဲတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်သင့္ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိသမျှအချိန်ကိုပြန်လာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မပယ်ဖျက်သင့်၏။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအများကြီး၏သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကြောင့်ကျွန်တော်သိသောအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးအပေါ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဆိုဒ်အမည်တားများစွာသောလူမှမပေါ်သွားတူခံစားသောအကြောင်းအရာ၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဒီဆိုဒ်ကိုအခမဲ့နှင့်လူတိုင်းအတွက်ဖွင့်။ လိုအပ်မည်မဟုတ်ပေးစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်။ သင်အသုံးပွုနိုငျအားလုံးအစည္း၏အင်္ဂါရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ။ နှင့်များစွာသောအခြားနည်းလမ်းများအတွက်သင်ခံစားရလိမ့်မယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလှန်အသိုင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။, ကျနော်တို့မှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်အားလုံးဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်နှင့်အတူလာမည္ဘုတ်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တစ်ဦးစကားပြောလိုင်းအဘယ်မှာရှိအပေါင်းတို့ကစားသမားတွေကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ကမိမိတို့အရွယ်ရောက်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်ဘာမှမသူတို့ကချင်တယ်။